james December 1, 2012 - 9:02 pm ရဲမှူးကြီးကလဲ..တာဝန်အ၇လုပ်၇ပါတယ်ဆိုတော့….မီးလောင်ဗုံးနဲ့ဖြိုခွင်းဘို့..အမိန့်ထဲမှာပါသလား…ကိုယ့်ဟာကိုယ်လက်တဲ့စမ်းတာလား….ခင်ညွှန့်ပြောသလို…..ခိုင်းလို့လုပ်၇တယ်ဆိုပါတော့…..ဘယ်သူခိုင်းမှန်တော့မသိဘူး…နေ၀င်းလက်ထက်ကလဲ…ကျောင်းသားသမဂကို..ဖြိုတုံးကလဲဒီလိုပါဘဲ…တယောက်နဲ့တယောက်လွှဲချပြီး..ရှောင်နေကျတယ်…..သမတကြီးလဲ..အသံမထွက်ဘဲ…ဘယ်နားသွားပုန်းနေလဲမသိဘူး…တော်သေးတာပေါ့..နိုဘယ်ဆုမပေးမိလို့..
Reply kyawmoe December 3, 2012 - 12:02 pm အားလုံးက မခံခြင်စိတ်နဲ့ အော်တာလား ဒီမိုကရေစီသွားဖို့အော်တာလား ကိုယ်ပိုင်ဆို
Reply thihamin December 1, 2012 - 9:03 pm “ကန်တော့တောင်းပန်တဲ့သူတွေက အနောက်ဘက်ကမ်းက လူတွေ ပါ မပါမသိဘူး ”၊ လုံးဝမပါ ပါဘူး။ အရှေ့ဘက်ကမ်းက ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တက်ပေးတာပါ။ ရဲမှူးကြီး စန်းယုက “ဖြေဖို့ ကို မရှိတာ” မဟုတ်ပါဘူး။ သူဆရာတွေက အဖြေကို ထည့်ကိုမပေးလိုက်တာပါ။
Reply ponan December 1, 2012 - 10:21 pm l think that is…..
Reply Maung Maung December 1, 2012 - 11:00 pm I lisen to MRTV. San Yu is big liar.
Reply thuratun December 1, 2012 - 11:02 pm ဘုန်းကြီးခေါင်းခေါက်ပြီျးမှ ကန်တော့ပါလို့ ပြောရင် ရပါသလား။အစကတည်းကမစဉ်းစားဘူးလား။ ပြည်သူတွေ ပါးစပ်ကအော်တောင်းနေရုံနဲ့တော့
Reply Mon- Kayin December 3, 2012 - 12:16 am ဒီမိုကရေစီကိုလွယ်လွယ်နဲ့တော့မရနိုင်ဘူးဆိုတာသိထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သမ္မတကို
Reply Mon- Kayin December 3, 2012 - 12:22 am စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီ ကိုမြန်မာနိုင်ငံလိုနေရာမျိုးမှာလိုချင်ရင် တိုက်ယူမှရမယ်
Reply ohnmar December 3, 2012 - 5:56 pm သူတို့ကအေးအေးဆေးဆေးမပေးချင်ဘဲဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်
Reply Ngal Hriang December 2, 2012 - 3:10 am Slapping one man’s cheek intentionally and caused pain, then say sorry with lip’s service may not heal the wound, especially emotional pain and scar.
Reply MM December 2, 2012 - 3:15 am “စစ်ကိုင်းတိုင်း ရဲမှူးကြီး ဦးစန်းယုက သပိတ်စခန်းမှ သံဃာတော်များကို လူစုခွဲရာတွင် လူအင်အားအနည်းဆုံး တတ်နိုင်သမျှ ထိခိုက်မူမရှိအောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း၊ မီးသတ်ပိုက်၊ မျက်ရည်ယိုဗုံးတို့ကိုသာ အသုံးပြုခဲ့သည်”ဟု မိုးလုံးပြည့်မုသား ပြောတုန်းပါပဲလား။ “လုပ်ချင်တာကိုလုပ်၊ ပြီးရင် ငြင်း” ဆိုတဲ့ စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ လှည့်ကွက်ပါ။
Reply koko December 2, 2012 - 8:12 am အမိန်ပေးတာဘယ်သူလဲ။တာဝန်အရှိဆုံးက ဘယ်သူလဲ
Reply ဖိုးလုံး December 2, 2012 - 8:41 am ရှေ့ဆုံးကရဲနှစ်ယောက်က သွားနေရင်းပြောသွားကြတယ် ” ဟင်းဟင်း..လုပ်တော့သူများတွေ။
Reply pps12345 December 2, 2012 - 12:03 pm ကိုသီဟမင်းပြောတာ မှန်ပါတယ်။ သူ က ဆရာ့တပည့်ကောင်းလေ။ ဒါကြောင့် ရဲမှူးကြီးဖြစ်လာတာ ပေါ့။ နောက်မဟုတ်ရင်တော့ စခန်းမှူးလောက်နဲ့ ပင်စင်ယူရမှာ။ လာတောင်းပန် တယ်ဆိုတာ တော့ ကောင်းပါတယ်။ လူထုကလည်း နားလည်ပါတယ်။ သူတို့တာဝန် အရလုပ်ရတယ်ဆိုတာကို။ အမိန့်ပေးတဲ့ လူမှာသာ အပြစ်ရှိတာပါ။
Reply MM December 2, 2012 - 12:15 pm (ထိုသြ၀ါဒခံယူပွဲသို့ မုံရွာမြို့ပေါ်မှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၂၀ ကျော် တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ဆရာတော်အပါး ၂၀ သို့ ဒဏ်ရာရ ကိုယ်တော်များအတွက် စောင်၊ သင်္ကန်းနှင့် တခြားပစ္စည်းများလှူဒါန်းခဲ့သည်။)
Reply pn wara December 2, 2012 - 12:56 pm ရဲတို့ စစ်တပ်တို့ က ကိုယ့်လူမျိုးချင်းတို့ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားချင်းတို့ ဆို လက်သံပြောင်ပါ ဗျာ။ ပေါက်ဖေါ်ကြီးဆို ခေါင်းတချက် မော့ မကြည့်ဝံ့ဘူး။ ပြောတော့ တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေး- လုပ်တော့ ကိုယ်လူမျိုး မျိုးတုန်းပျေက်ကွယ်ရေး- ဘယ်သူသေသေ ငတေ မာပြီးရော ဆိုတဲ့ လူရမ်းကားတွေ- ဒီပုံစံ ဒီသောက်ကျင့်မျိုးနဲ့တိုင်းပြည်က မွဲသထက်မွဲ-ဆင်းရဲသထက် ဆင်းရဲဦးမယ်-ရပါလိမ့်မယ်- တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေး- အပြောနဲ့ အလုပ် တခြားစီ။ စစ်တပ်က အစိုးရ အမိန့်မနာခံ- ကိုယ်ထင်ရာကိုယ်စိုင်း- အစိုးရက အပစ်ရပ်ရေးပြော- စစ်တပ်က တိုက်-အော် ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ-
Reply ဘကျော်ထူး December 2, 2012 - 1:05 pm အဲဒီ မြန်မာလို ပလိပ်လို့ခေါ်တဲ့သတ္တ၀ါတွေက လူရော ရောဂါရော မကောင်းတဲ့ အကောင်တွေပါ။
ReplyaDecember 2, 2012 - 1:13 pm ခိုင်းတာပဲလုပ်တတ်တာကိုဘာလို့ခေါ်လဲ။
Replyုposoidon December 2, 2012 - 3:11 pm ငရဲမှတပါး အခြားမရှိ။ လုပ်တုံးကစဉ်းစားပါလား။ မသိလို့ လုပ်ခဲ့ တာမဟုတ်ဘဲ၊ သေစေ ပျက်စေ နာစေ ဆိုတဲ့ စိတ်
Reply ဦးမင်းမြတ်သူ December 2, 2012 - 3:56 pm ရဲတွေဘက်ကလည်း အထက်အမိန့် ကိုနာခံရတော့ သူတို့ ဘက်က ကြည့်တော့လည်း မှားတော့မမှားပါဘူး။ ရဲမှူးကြီး စန်းယုကို ပြောချင်တာကတော့ အထက်ကအမိန့် ပေးတိုင်း လုပ်သင့်တာကိုပဲလုပ်ပါ။ မလုပ်သင့်တာကိုမလုပ်ပါနဲ့ ။ ရဲမှူးကြီးအဆင့်ဆိုတာက Commender အဆင့်ပါ။ ငြင်းပယ်လို့ ရပါတယ်။ အဲဒီလို ငြင်းပယ်လိုက်လို့ရဲမှူးကြီး မှာ အခက်တွေ့ တယ်ဆိုရင် ရဲမှူးကြီးရဲ့ အနောက်မှာ ပြည်သူတွေ ရှိပါတယ်။ ပြည်သူချစ်တဲ့ ရဲတွေ ဖြစ်အောင် တည့်မတ်ပေးချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Reply Oo Thaw December 2, 2012 - 5:57 pm Ye Min Gyi,
Reply Maung Myo December 3, 2012 - 12:22 am Actually, police’s work is totally not relate to the army.
Reply robert December 3, 2012 - 1:14 pm ရခိုင်.ဘဂ်လားအရေးတုန်းက ကိုယ့်နိုင်ငံကိုခိုးဝင် ကိုယ့်လူမျိူးကို စော်ကားတဲံ့ သူတွေ ကြတော့ဒီလို ဗုံးမျိူးကို မသုံးဘဲ ကိူယ့်လူမျိုး သာသနာ စောက်ရှောက်ပေးဘို့ အကြမ်းမဖက်ပဲ ငြိ်မ်းချမ်းစွာဆန်ဒဖေါ်ထုတ်တဲ့လူတွေကြရက်ရက်စက်စက်လုပ်ရဲတယ် ကိုယ့်လူမျိုးအခြင်းခြင်းကြအရမ်းသတိ ရှိကြတယ် သူများနဲ့ဆိုရင်တော့…………..
Reply oomoe December 3, 2012 - 1:31 pm တာဝန်အရလုပ်ဆောင်ရခြင်းဖြစ်သောကြောင့် မေတ္တာရှေ့ထားကာခွင့်လွှတ်ပါရန် လျှောက်ထားတဲ့တကာကြီး
Reply မေတ္တာရှေု့ထား December 4, 2012 - 7:27 am ဗုဒ္ဓဘာသာတွေနော်၊ကံကြီးထိုက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်နေတယ်၊မလုပ်ခင်ကတဲကသေသေချာချာစဉ်းစားသင့်တယ်